ISikunye Champions - Sikunye
ISikunye ChampionsIvo Kittel2021-03-09T09:45:37+02:00
ISikunye Champions inentshisekelo yokweseka imiphakathi yamasonto ukuze ixhume futhi inakekele imindeni enezinsana kwiFirst Thousand Days (FTD).
ISikunye Champions ngabalandeli bakaKristu abasekela umholi webandla labo ukukhulisa ibandla labo libe ngumphakathi onobungane nosekela imindeni enezingane ezincane. Ompetha badlala indima enkulu ekwenzeni uhlelo lwebandla, ukuthola amavolontiya okuvakashela imindeni futhi baqale izingxoxo nabanye ukubona ukuthi ibandla lonke lizungezile futhi linakekela imindeni.
ISikunye Champions ingabaholi beqembu labantu elisebenzela imindeni. Balalele abazali, bathole amathuba futhi baxhumane nabaholi bebandla ukuhlela ukuthi ibandla lingayisebenzela kanjani kangcono imindeni. UChampion akenzi yonke imisebenzi, kepha kunalokho uqasha abantu eqenjini futhi abanikeze ubuholi. UChampion ungumuntu okhomba phambili phakathi kwebandla neSikunye futhi uxhumana phakathi kwabo bonke abantu abahlukahlukene ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi kwenzekani. UChampion uhola inqubo yokuhlela ukuqinisekisa ukuthi ibandla lenza okusemandleni ukusebenzela imindeni kahle.
Ingabe ungumuntu ‘owenza kwenzeke’ ongadonsela abanye ukubona imindeni iqiniswa futhi isekelwa. Uma kunjalo, nazi ezinye zezinyathelo zakho ezilandelayo:
Khuluma nomholi webandla lakho.Sikholelwa ekutheni kungcono kakhulu ukuthi ubuholi bebandla bube nemizamo yokusebenzela imindeni. Uma ephaphamisa ibandla lakho,lapho-ke sebazi ukuthi ngubani uSikunye. Uma bengazi, bese ubamemela emcimbini weBandla nowasekuqaleni kwempilo Ukusiza babone ngaso linye.
Bhalisela ukuba yiqhawe. Gcwalisa ifomu lesicelo. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi sikwazi ukuxhumana nawe, sikusekele futhi sikwazise ngemicimbi nezinsizakusebenza ezizayo.
Sebenzisa ububanzi bamathuluzi nezinsizakusebenza kumhlahlandlela wamaqembu e-FTD.Lokhu kukunikeza imininingwane namathuluzi wokukusiza uye phambili. Hlola ezinye izinsiza zethu ukuthola izimpendulo zemibuzo ongahle ube nayo.
Qala ukukhulisa iqembu. Usebenzisa amathuluzi kumhlahlandlela wakho, qala ukukhuluma namanye amalungu ebandla ocabanga ukuthi angathanda ukusebenzela imindeni. Ufuna ukwenza lokhu nabanye. Isinyathelo sokuqala esihle kubo ukuya eBandleni nase-Early Life Webinars ukuqonda umqondo omkhulu.
Iya emihlanganweni yokuhlela yamaqhawe. Lokhu kungama-webinar abalulekile, akuhlomisela ukwenza uhlelo lwebandla lakho nokuthi lingasebenzela kanjani imindeni. lokhu akukhona ukukopisha amanye amasonto, kodwa ukuhlola ukuthi wena, iqembu lakho kanye nesonto lakho ningenza kanjani ezimpilweni ezincane nalokho eninakho vele. Hlola okuningi lapha